Enwere mmemme mgbakwunye ole na ole nke m bụ mana m na-ahọrọ ihe m na-akwalite na blọọgụ anyị yana site na mmekọrịta anyị. Enwere nsogbu na-atọ ụtọ ma a bịa na mgbakwunye mmekọ. Imirikiti ohere mgbakwunye nwere ike ịdabere na klout gị ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ ị nwere… ọ bụchaghị dabere na mmetụta gị na ikike ịtụgharị atụmanya n'ime ndị ahịa.
Mgbakwunye usoro nile bu ebe ma ChaCha malitere ulo oru ihe nke anumanu di iche Mmekọrịta ChaCha. N'adịghị ka mmemme mgbakwunye nke na-eme ka ndị mmadụ kpọsaa mgbasa ozi mgbasa ozi, ChaCha na-eji mmemme mmemme iji mee ka ndị mmadụ kpọọ aha ọdịnaya ha mmadụ… mgbe ahụ kwụọ ha ụgwọ dabere na ndị na-ege ntị na-pịa site na. Ọ bụ ntakịrị ngwakọ n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa. Ihe mgbaru ọsọ bụ, n'ezie, ịkwọga okporo ụzọ na saịtị ahụ - nke na-emezi ndị na-ege ntị ka ha bụrụ mgbasa ozi na nkwado ego.
ChaCha emeela n'ezie ụfọdụ amamịghe nke na-adịbeghị anya… site na ọ bụ mobile ngwa na Iris, na-eru 2 ijeri ajụjụ zara na-erite uru - Enwere m obi ụtọ na-enweghị atụ maka ndị ọrụ ha. Ha na-arụsi ọrụ ike ma na-agbanye envelopu mgbe niile. Kudos na Scott na ụlọ ọrụ!